Zivele enkantolo izithandani ezephule umthetho | isiZulu
Zivele enkantolo izithandani ezephule umthetho
Asivele nje sihoxise amacala - NPA
I-NPA ibhacaze kakhulu - IFP
Johannesburg - Izithandani zaseNorth West zivele enkantolo eRustenburg Circuit Court ngemuva kokwehluleka ukwenza njengokomyalelo ovimbela ukusetshenziswa kwempahla yazo, kusho iNational Prosecuting Authority, ngoLwesihlanu.
Okhulumela i-NPA esifundazweni uPhaladi Shuping uthe uMarthie no-Andries Mulder bavele enkantolo ngoLwesine ngemuva kokuba iNkantolo eNkulu yaseNorth West, ikhiphe umyalelo ngoSepthemba 23, 2011.
"Inhloso yomnyalelo kwakungukumisa ukusetshenziswa kwempahla yabo kuze kuphothulwe icala ababhekene nalo," usho kanje esitatmendeni.
"Kutholakale ukuthi uMarthie Mulder uyasoleka ekukhwabaniseleni inkampani iVan Velden and Duffey Attorneys...kusolakala ukuthi wathatha imali yenkampani wayifaka kwi-account yakhe neyomyeni wakhe. Imali ilinganiselwa ngaphezulu kuka-R5 million."
Lona wesifazane wayeqashwe njengonobhala engamele ukuphathwa kwamafayela eVan Velden and Duffey Attorneys, mayelana nezimali ezisuke zitholwe ngezingozi zomgwaqo.
NgoNovemba, kutholakale ukuthi abakwa Mulders basuka bayohlala kwenye indawo kwase kwenziwa uphenyo olunzulu.
"Ngokombandela womyalelo wenkantolo, uMulder unomsebenzi wokuthumela incwadi efungelwe ekhombisa imali ayisebenzisile nengenile zinyanga zonke,” kusho uShuping.
Emizuzwini eyi-3 edlule